Orthodox Christian Initiative for Africa: Onye Nzọpụta anyị na-ekwu , "Nye M obi gị dum ! " Ma ekwensu na-ekwu , " m mkpa bụ naanị otu n'ime mkpịsị aka gị . "
Onye Nzọpụta anyị na-ekwu , "Nye M obi gị dum ! " Ma ekwensu na-ekwu , " m mkpa bụ naanị otu n'ime mkpịsị aka gị . "
oké okwu nke amamihe - Kraịst Ọtọdọks okenye † Arsenie Papacioc, Romania
Okenye Arsenie Papacioc nke Romania , gọzie ebe nchekwa , bụ akụkụ nke oké ọgbọ nke confessors n'ihi Kraịst ahụ tara ahụhụ dị ukwuu mgbe a tụrụ mkpọrọ n'ihi okwukwe ha n'okpuru ekweghị na Chineke ọchịchị Kọmunist nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ .
Okwu nke amamihe na Okenye Arsenie Papacioc
Nzọpụta dị naanị na Kraịst na Chọọchị Ọtọdọks .
Ọ bụrụ na ị na- Ọtọdọks , ị kwesịrị ijide kpara mkpa nke ukwuu ka ozizi ya , ma ọ bụrụ na ị ga -ada n'ime ịjụ okwukwe .
Anyị apụghị jụ ọbụna ihe iota si Ọtọdọks eziokwu .
Nke a bụ oké okwu na -echebara echiche Chineke . Dị otú ahụ ọ bụ na ọdịda nke Katọlik ! N'onwe ya , m agaghịkwa ewere ya na ya na chọọchị , ma a ọchịchị ahụ na a clerical aha .
Ihe dị iche iche Ọgụgụ isi na mmụta enweghị uru, ma ọ bụrụ na ha na-adịghị na ọrụ nke ịhụnanya .
Nne nke Chineke na-anọchi anya ndị mmadụ .
Udo ka ukwuu karịa ikpe ziri ezi .
Anyị ga- refute ozugbo niile [ ọjọọ ] echiche na- na- uche , na ha ga-abịa ruo mgbe ikpeazụ anyị ume.
Kwere na Chineke , n'anya ụka ma na-agbaso [eke spirit] nna nna nke chọọchị.
Na-eje ije ndụ gị na ụzọ nke ịdị umeala n'obi .
Nyene ezigbo aha nso Christ .
Na-ekwusi ike ọzọ na-ekpe ekpere .
Ị ga- free nanị mgbe ị na-eje ije na ịhụnanya n'akuku ndị kpọrọ gị asị !
Nọrọ ka na Kraịst n'ihi na mgbe ebighị ebi ...
Chineke na ndị ọzọ n'ihi na anyị nzọpụta karịa Setan n'ihi na anyị na mbibi .
N'èzí Chọọchị , n'ebe na-adịghị nzọpụta!
Hel dị naanị ná mpụga Chọọchị. Ọ bụ onye pụrụ ime ihe ọma ma ọ dịghị eme ya , na-enyefe mmehie .
Naanị ekwensu apụghị -azọpụta. Enweghị Chineke amara , ọ gaghị ekwe omume ka a zoputara nani site gị omume , n'agbanyeghị otú oké ihe ascetic gị nwere ike ịbụ .
Ọ bụ Cross na zọpụta ụmụ mmadụ !
Ọ bụghị Chineke ikpe ziri ezi ma ọ bụ ọrụ ebube , ma Ya Cross !
Mgbe Jizọs akpọgideworo n'obe , Setan e meriri .
Eluigwe jupụtara nke chegharịrị echegharị mmehie .
Na ndị si hell , Ọ na- hụrụ n'anya.
Ma ha na- kpaliri site ịhụnanya Ya, site na Ya ikpe ziri ezi .
Na ihe Kraịst emeghị eme iji zọpụta anyị n'aka hell ?
Egwu ọnwụ na-adịghị mere site na ọnwụ ma site ndụ .
Ọ bụrụ na ị chọrọ ghara ịtụ egwu ọnwụ , ibi ndụ dị ka Onye Kraịst !
Naanị ndị na- adịghị ebi ndụ na Kraịst , na-atụ egwu ọnwụ !
E nweghị uche ma ọ bụ nzube ya, ma ọ bụrụ na e nweghị Chineke .
Ọ dịghị ihe na -efu , dị ka ogologo dị ka okwukwe anyị dị ndụ!
Na Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ
Ịhụnanya sonyeere ihe niile na abụọ .
Nke a bụ ihe nnọchianya nke mgbanaka agbamakwụkwọ.
A na nwunye mere nnọọ n'ihi na obi ụtọ nwere bụla pụtara .
Alụmdi na Nwunye pụtara na-eru ọnụ ruo mgbe ebighị ebi .
na -ekpe Ekpere
Chineke bụ nnọọ ọgaranya !
Ọ na -echere anyị ! ...
Ọ echere ka anyị na -arịọ !
N'ebe ọ bụla , ị bụ na mgbe ọ bụla ị na- nwaa , na-ekpe ekpere na adịghị nkụda mmụọ !
Onye ọ bụla chọrọ inweta onyinye nke ekpere , ga- nkịtị na-ekpe ekpere .
Anyị na-ekwu okwu nke ukwuu banyere ekpere .
Nke ahụ bụ otu ihe na ya enweghị ike -atụle ma eme .
Iji ekwensu , adịghị anyị mkpa iji nye nkọwa !
Anyị nwere ike ikwu okwu banyere ekwensu na-enweghị na-ekwu banyere Chineke .
Na Chineke ' kere eke, ekwensu bụ a hap .
Ì kwere na nke ekwensu bụ free ?
Ọ dịghị !
Ọ bụ ihe kasị bounded n'ihi na ọ bụghị na Kraịst ...
Ya mere, atụla egwu nke ya .
Ọ na a hap , ọ bụghị a ike .
E nweghị mmekọrịta dị n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ .
Ma site na ya , n'oge na-adịghị na ọ ga -ewe gị dum. Dum gị. Ọ bụrụ na ị na -emerụ mara otú ihe ịnụ ọkụ n'obi Satan odori ka ịkwụsịtụ anyị ekpere !
Leekwa ihe ndị a
Isiokwu banyere Chọọchị Ọtọdọks na Nigeria
Isiokwu banyere Chọọchị Ọtọdọks na Cameroon
Njikọ nke mmadụ na Chineke (isiokwu dị na Bekee)
Ihe ndi ozo banyere njikọ nke madu na Chineke
Okpukpe Ndị Kraịst oge ochie (Chọọchị Ọtọdọks) n'Africa (isiokwu dị na Bekee)
Ετικέτες Chọọchị Ọtọdọks, Igbo, In Romanian, Orthodox Teachers, Romania